देशमा केही त होस - Janakpur Today
देशमा केही त होस
प्रत्येक पाँच वर्षमा चुनावव्दारा सरकार परिवर्तनगर्ने संसदीय प्रणालीका विरुध्द भारतका सुप्रसिध्द समाजवादी चिन्तक डाक्टर राम मनोहर लोहियाले एकपटक भारतीय संसदमा भन्नु भएको थियो, ज्यूँदो देशले खराव सरकार परिवर्तनगर्न पाँच वर्ष पर्खिन सक्दैन । हाम्रो संबिधानले पाँच बर्षको शर्त त राखेको छैन, सरकार हटाउन त्यति सजिलो पनि पारेको छैन । अहिले त झन दुइ तिहाईको सरकार छ । पाँच वर्षको पर्खाइ जनताका परिवर्तनका आकांक्षाहरुका लागि लामो हुन्छ । डाक्टर लोहियाको यो भनाई पण्डित जवाहरलाल नेहरु सरकारको सुस्त गतिका विरुध्द लक्षित थियो । डा. लोहियाको आशय एक एक वर्षमा सरकार परिवर्तन गर्नु पर्दछ भन्ने पक्कै थिएन ।
हामी नेपालीले त पूरै सात दशक परिवर्तनलाई पर्खेरै विताएका छौं । यसबीच हरेक एक दुइ वर्षको अन्तरालमा सरकारहरु वदलिएका पनि हुन । र पनि, विकास भएको छैन । पन्चायत व्यवस्था वदलियो, राजाको निरंकुश शासन परास्त भयो । संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि कांग्रेसले सर्व शक्तिमान सरकार वनाउने मौका पायो जनतावाट । त्यो सर्व शक्तिमान सरकारले पनि केही गर्न सकेन । उल्टै मानिसको चिन्तन प्रक्रिया हिंसात्मक राजनीतितिर मोडियो । त्यसपछिको समयमा सवै कुरा वदलियो । राजा वदलिए । गणतन्त्र आयो । तर, नेपालको शासन पध्दतिमा, सरकारको कामगर्ने शैली र सोचमा कहिल्यै कुनैप्रकारको वदलाव आएन । जनताले आशा गरेका थिए, माओवादीको सरकार आएपछि धेरै कुरामा परिवर्तन आउने छ । जे भएपनि यी त नयाँ राजनीतिक शक्ति हुन, रगत वगाएर, लडेर आएका । पक्कै केही नयाँ विचार लिएर आएका होलान ।
संविधान सभाको चुनावपछि माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा वामपन्थीहरुको गठवन्धन सरकार वन्यो । केही समयपछि त्यो सरकार आफै परिवन्दमा पर्यो । प्रचण्डले राजिनामा दिए । पछिल्लो समयमा माओवादीहरु धोविघाट माओवादी केन्द्रसम्म छाए । अहिले उनीहरु एमालेसंग मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भएका छन । एसएमएस मार्फत गरिएका मत संकलनका आधारमा लोकप्रिय वनेर उतिबेला आफनो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सफल वावुराम भट्टराई अहिले समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका छन । राजनीति भनेको यस्तै भएको छ ।
यो देशका जान्नेसुन्नेहरु कोही पनि मूर्ख छैनन । छिमेकीहरुको दवावमा कामगर्ने वानी परेको छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुमा । भनी रहनु पर्दैन, त्यो दवाव नपरेको भए आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनका प्रक्रियाहरु अहिलेसम्म पनि अलमलमा नै हुने थिएनन । नेपाल जलस्रोतमा धनी छ । कुनै विदेशी विशेषज्ञले एक दिन विहानै भनिदियो, नेपाली हो, व्यूँझ र खुशी होउ । तिमीहरुको देशमा वगी रहेका नदी–नालामा ८३ हजार मेगावाट विद्युत त्यत्तिकै बही रहेकोछ । यति धेरै विजुलीहुने देश गरीव हुनै सक्दैन । विदेशीले अरु पनि थप केही भन्न खोजेको थियो, खुशीले रमाएका हामीले सुन्दै सुनेनौं । त्यसवेला देखि अहिलेसम्म हामी रमाएको रमाएकै छौं । संसारमा आएको जलवायु परिवर्तनले नेपालका नदी–नालामा वग्ने पानीको क्षमता कति प्रतिशतले घट्यो अथवा कति प्रतिशतले वृध्दि भयो ? त्यसको लेखाजोखा छैन हामीसंग । हामीलाई देशको गौरव धान्दैमा र राष्ट्रियताको गीतापाठ गर्दैमा फुर्सद छैन । नदी–नाला देशका गौरवहुन र राष्ट्रियताका प्रतीक । यसको अपार क्षमताको सुरक्षा गर्दागर्दै गरीव जनताको जुनी विति सकेको छ । यस्तो अवस्थामा नदी–नालाको वर्तमान क्षमताका वारे प्राविधिक अध्ययन कसले गर्ने ? जनताको तहमा यस्तो अध्ययनगर्ने क्षमता छैन, सरकारले यसको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन ।
अनुत्पादक रुपमा रहेको यो जल–विद्युत सम्पदा कौवाका लागि पाकेको वेल वरावर भएको छ नेपाली जनताका लागि । तर, नेपालका टाठावाठाका लागि यही अनुत्पादक जल अपार व्यक्तिगत सम्पत्ति वनेको छ । राजनीतिको वार्गेनिंग टेवुलमाथि कोशी कर्णाली फिंजाएर धेरै नेताहरुले वरत्र र परत्र समेत सुधारी सकेका छन । पहिले राजा र उनका भारदारहरु विदेशका जल विद्युत प्रवध्र्दकहरुलाई यही जलशक्ति देखाएर पैसा कमाउँथे । संसदीय कालमा पनि प्रजातन्त्रका नेताहरुले यही भूमिका दोहोरयाए । गैर सरकारी संस्थाहरुको संरक्षकका रुपमा रहेको तत्कालीन एमाले पार्टीले साना जल विद्युत प्रवध्र्दकहरुको स्वार्थ रक्षाका लागि विश्व वैंकको लगानीमा निर्माण हुन लागेको अरुण तेस्रो आयोजनामा रोक लगाएर नेपालमा अन्धकार युगलाई निरन्तरता दिएको कसैले बिर्सिएका छैनन । त्यसपछि देशमा खुद्रे जल विद्युत आयोजनाको वाढी नै आयो । यता गणतन्त्रकालमा शासनमा स्थापित भएका एकथरि नेताहरु पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिन खोजी रहेका छन । निर्माण शुरु भै सक्नुपर्ने कतिपय जल विद्युत आयोजना तावाबाट खसेर भुंग्रोमा परेको अवस्थामा छन ।
कुनैपनि विद्युत आयोजनामा कुरा कमिशनको भाउमा नै अडकिने गरेको बताउँछन जानिफकारहरु । आपूmलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष वताउने जल विशेषज्ञदेखि उर्जा विशेषज्ञसम्म सवै भाउको खोजीमा राजनीतिक दलको आंगन चाहारिरहेका भेटिन्छन । ठूला जल विद्युत आयोजनाहरुमा भाउको जति महत्व हुन्छ, त्यो अरु कुनै आयोजनामा हुँदैन । भाउमा कुरा नमिलेसम्म राष्ट्रियता निरन्तर संकटमा परी रहन्छ । जनताले आधा पेट खाएर, फाटेका टालाले आंग छोपेर, आफना वालवच्चाको भविष्यको धराप थापेर, जसरी भएपनि, नेताहरुका लागि राष्ट्रियताको रक्षा गरी दिइ रहनु पर्दछ ।
देशको जे सुकै होस । देश गरीव नै भए पनि के भो र ? देशको राष्ट्रियता जोगाउन महान जनयुध्द लडेका र महान जनताको बहुदलीय जनवाद स्थापित गरेका महान पार्टी सक्षम छन । नेताहरुको तर्क छ, विकास गर्दछ । अरवौं रुपियाँमा महंगो उर्जा किनेर पनि काठमाडौंमा वत्ती वालिएकै छ भने यसलाई विकास नभने के भन्ने ? वुझनुपर्ने मुख्य कुरा यति मात्रै हो, देशमा ठूला आयोजनाहरु नआएसम्म मानिसको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन आउन सक्दैन । अव यो काममा निर्णायक तहमा वसेका नेताहरु मसक्क मस्किएर लागेनन भने परिवर्तन टिकाउ हुन सक्दैन । नयाँ संविधानको प्रतिरक्षाका लागि समान्तरमा आर्थिक विकासका योजनाहरुको कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । यो चेतना सबैमा आओस ।
मजदुरमाथि गोली प्रहार, गोली हान्नेको खोजी
खाल्टोमा डुबेर एक बालकको ज्यान गयो